तनहुँका नेकपा सांसदको आग्रह : रामचन्द्रजी, विमानस्थल पनि उद्घाटन गरेर फर्किनू ! – नेपाली सूर्य
December 3, 2020 Nepali SuryaLeaveaComment on तनहुँका नेकपा सांसदको आग्रह : रामचन्द्रजी, विमानस्थल पनि उद्घाटन गरेर फर्किनू !
१८ मंसिर, पोखरा । तनहुँको बुल्दीखोला पुल उद्घाटनसम्बन्धी विवाद देशैभरि चर्चाको विषय बनेको छ । निर्माण सकिएको २ वर्षपछि कसले उद्घाटन गर्ने भन्ने दुई नेताको टकराव र प्रतिष्ठाको लडाईंले व्यास नगरमा ठूलै तरंग आयो ।
वरिष्ठ नेता पौडेल पक्राउ परेपछि देशभर यसले तरंग ल्यायो । कांग्रेसले आन्दोलनका कार्यक्रम नै घोषणा गर्‍यो । सरकारले अधिनायकवादी रबैया देखाएको भन्दै बिहीबार दमौलीमा प्रदर्शन गरेर विशाल जुलुसहित अन्ततः वरिष्ठ नेता पौडेलले पुलको उद्घाटन गर्ने सपना पूरा गरी छाडे । onlinekhabar
पोखराकी यि युवतीले साउदीमा काम गर्ने युवकलाई अष्ट्रेलिया लैजान्छु भन्दै नेपाल बोलाएर लुटिन् २५ लाख रुपैयाँ (भिडियो)
प्रहरीको घरमा चोरी-गर्न पसेका चोर घरधनीकी छोरीको कोठामा गएर सुते`पछि….
बुटवलमा सिल तोडिएका बाकस, स्वस्तिक छाप नै भित्र भेटिएपछि…
May 19, 2022 Nepali Surya